နိုင်ငံဝန်ထမ်းများလက်ရှိခံစားနေတဲ့လစာငွေ အပြင်ထပ်မံပြီး၂ သောင်းကျပ်တိုးပေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်ပြ” … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများလက်ရှိခံစားနေတဲ့လစာငွေ အပြင်ထပ်မံပြီး၂ သောင်းကျပ်တိုးပေးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်ပြ” …
‎”၀န်ထမ်းလစာများ ကျပ်နှစ်သောင်းတိုးရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် တင်ပြ”
နေပြည်တော် မတ်လ ၁၅ ရက်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ ဘဏ္ဍာငွေအရ သုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးဝင်းရှိန် က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် သို့ တင်သွင်းရာတွင် ယခုနှစ် ၂၀၁၃.၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအတွက် လစာနှုန်းထားကို ကျပ် ၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်း) စီ တိုးမြင့်ပေးရန် နှင့် အချိုးကျ တိုးမြင့်လာမည့် ပင်စင် လစာ ဆုငွေများအတွက် သာမန်အသုံးစရိတ်တွင် ထည့်သွင်းလျာထားထားကြောင်း၊ထို့အပြင် လက်ရှိခံစား ခွင့် ပြုထားသော အပိုထောက်ပံ့ကြေး၊ဒေသစရိတ်တို့ကို လည်းပြောင်း လည်းမှု မရှိ ဘဲ ဆက်လက်ထောက်ပံ့သွားရန် လျှာထားထားကြောင်း ပြောကြားသည်။ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော်၏ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းပေါင်း ၁ သန်း နှင့် ၂ သိန်း ခန့်နှင့် နေ့စားဝန်ထမ်းဦးရေ(၇ သောင်း ၄ ထောင်)ခန့်နှင့် အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းဦးရေ ၇ သိန်း ၆ သောင်း ခန့်တို့အတွက် ခန့်မှန်းလျာထားငွေ ကျပ် ၃၈၅ . ၆၈၂ ဘီလီယံ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။( စိုင်းနောင်ပေး ပို့သည်)Re-Post By ACM 15-3-2013
အေးချမ်းမွန် Credit & Copy From >>Popular Myanmar News Journal<< Thank
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ အားလုံး လစာ ကျပ်နှစ်သောင်းတိုးမည်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၁၅နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ အားလုံးကို ယခင်လစာငွေ အပြင် နှစ်သောင်းကျပ် တိုးမြှင့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေး နှင့် အခွန်ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တွင် ပြောကြားသည်။အစိုးရဌာန များတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော နေ့စားဝန်ထမ်းများကို တစ်နေ့လျှင် ခုနစ်ရာကျပ် တိုးမြှင့်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများ အတွက် ပင်စင် လစာ နှင့် ဆုကြေးငွေ များကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးရန် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများကိုလစာငွေနှစ်သောင်းကျပ်စီနှင့် နေ့စားဝန်ထမ်းများကို ခုနစ်ရာကျပ်စီကို လာမည့် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်တိုးမြှင့်ပေးအပ် သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကျင်း ပသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ၂၀ ရက်မြောက်အစည်းဝေးတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီး ဌာန၊ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်ကပြောကြားခဲ့သည်။7Day News Journal
This entry was posted on March 16, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ကြားဖြတ်သတင်း – ရိုဟင်ဂျာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ	Questions to Dr. Aye Chan by Political Parties →